Shina Valeron Cross-modely sarimihetsika tena adhesive godorao manify Manufacturers sy Suppliers | Hongyuan
RAM-CL Valeron Cross-modely sarimihetsika tena adhesive godorao manify
Ny USA-dehibe cross-fomba vaovao horonantsary dia karazana-tena adhesive tantera-drano kely manify amin'ny lafiny hatevin'ny sy mafy orina.
Shuangsheng RAM-CL Valeron Cross-modely sarimihetsika tena adhesive godorao manify dia lamba-tahaka ny tena adhesive tantera-drano manify ny fanamiana sakan'ny, izay composited amin'ny alalan'ny manokana dingana-penitra synthetic fingotra, tackifying resin sy ny lalana godorao toy ny firaiketam-po ara-nofo, USA-dehibe Valeron horonantsary Cross-fomba toy ny hatsarana ara-nofo, ary peelable mitokantokana sarimihetsika nanarona ny tena adhesive ambonin'ny sosona.
2. Product endri-javatra
① Strong dina: Hongyuan Group namarana stratejika fanekena US ITW Group mba manafatra Valeron Cross-fomba sy hanomboka sarimihetsika tena adhesive tantera-drano vokatra.
② Wide fampiharana: manify sy fitaovana mazava, tsotra fandidiana, maro asa fomba fiasa, ary azo ampiharina amin'ny toe-javatra isan-karazany ny asa any am-piasana toerana;
③ hatsiaka fampiharana: tsy misy fampiasana ny misokatra lelafo, angovo sy ny tontolo iainana mamonjy-namana;
④ Strong hery firaiketam-po: firaiketam-po mafy hery mba mahatsapa firaiketam-po tanteraka amin'ny drafitra tsara sosona sy hahatratra tsy tantera-drano sy ny rano-Fanidiana vokany.
⑤ tsara mateza: tsara fahanterana-fanoherana amin'ny fomba mahomby fanazavana be taona tsy noho ny fahari-fotoana ela hatsiaka amin'ny vanim-potoana miasa;
⑥ tranon'omby lafiny: miovaova lafiny ara-nofo mba tsy deformations noho ny hafanana be loatra fahasamihafana;
⑦ tsara harafesiny fanoherana: tsara puncture fanoherana sy ny tsara alkali sy asidra harafesiny fanoherana;
Strong firaiketam-po force
Fiarovana sy ny tontolo iainana sariaka
milamina ny lafiny
3. P roduct fanasokajiana sy ny famaritana
Manamafy ny GB / T23457-2009 [Pre-lena manify tantera-drano] Wet P
Fihenjanana / (N / 50mm) ≥
Elongation amin'ny faratampony fihenjanana /% ≥
70 ℃, 2hNo mikoriana, no Mandrotsaha fahamarinana
Low hafanana manovaova / ℃
Manamafy ny GB23441-2009 [tena arahina godorao manify tantera-drano] PE N
Tapaka elongation ny asfalta /% ≥
Ao amin'ny dingan'ny mamelatra ny lanitra, dia tsy misy asfalta coating sy ny manify ny hoditra manify niantsoany teo anoloan'ny tapaka
70 ℃, mitete ≦ 2mm
5. azo ampiharina sehatra
Azo ampiharina ny samy hafa injeniera tantera-drano toy ny tafo, ambanin'ny tany tetikasa, metros, tonelina, feno sodina lalantsara amin'ny sosona fiarovana sy tantera-drano injeniera avo fepetra ny fiarovana ny tontolo iainana na ny avo fepetra afo ady sy ny zavatra ilaina mba hiasa tsy misy misokatra afo.
Previous: Hakitroky avo HDPE polyethylene hoditra manify tantera-drano tena adhesive
Manaraka: CPE & EVA tantera-drano board
Epdm manify tantera-drano
Price mafy hamafin'ny fingotra godorao tantera-drano ...
Dach-manamboatra IC milina fanasan-damba
Tpo manify tantera-drano, Polyurethane Coating For Concrete , malefaka Polymer-simenitra Coating tantera-drano , Water Base Polyurethane Waterproof Coating , Acrylic tantera-drano Coating, Single-Ply Roofing Membrane ,